AntAll Association - Women Social Program | AntAll Association
Our Achievement & On Going Program
Women Social Program
Myanmar isasociety in which there is gender equality at all levels and where human rights are respected, enabling everyone to have equal opportunities to participate in decision-making and to live free from violence
အံ့သြ၏ ဒီပရိုဂမ်မှာ အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတန်းတူအခွင်းအရေးရရှိရန်(စီးပွားရေး ၊လှုမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဆောင်တာ)
အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကိုယ်တိုင် အမျိုးသမီးအခွင်းအရေးများအကြောင်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်သိရှိရေး
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးသူငယ် ငြင်းပန်နှိပ်စက်ခြင်းနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများ မှာ မြန်မာပြည်အနှံ့အဖြစ်များလားလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားနေမှုများအား လျော့ချရန်နှင့် ကာကွယ်တားစီးရန်နိုင်ငံတော်နှင့် အခြား အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် ကျောင်းများ၊ ရက်ကွပ်များ၊ မြို့များနှင့် နယ်ဒေသများအလိုက် အသိပညာပေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းလျက်ရှိသည်။
အံ့သြအဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိအစိုးရနှင့် private ကျောင်းများ တွင် လိင်အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေး ၊လိင်ပညာပေး ၊ ဥပဒေများအား အား အသိပညာပေးနိုင်ရန်
မိဘပြည်သူများနှင့် ကလေးသူငယ်များ မိမိတို့ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရပါက ပွင့်လင်းမြင်သာစွာတိုင်ပင်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတရပ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေး
လိင်အကြမ်းဖက်မှု ဥပဒေအား ယခု ထက်ပိုမို ပြင်းထန်သော ဥပဒေတရပ်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် ထိ ရောက် စွာ အသိပညာပေးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသားများသည် မိမိယူထားသောအမျိုးသမီးများအား ရိုက်နက်ခြင်းသည်ရိုးရာကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်ထောင်မကွဲလို၍သော်လည်းကောင်း၊ အသက်န္တာရယ် စိုးရိမ်၍သော်လည်းကောင်း အပြင်သို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်နေမှုများအား အများပြည်သူများသို့ ချပြအကူအညီတောင်းနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ အတွက် ရပ်တည်မှုအဖွဲ့အစည်းတခု အမျိုးသမီးရေးရာနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အံ့သြ၏ Domestic Violence Encounter Program သည်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှိ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခံနေရသောအမျိုးသမီးများ၏ အသံကို ပြည်သူများအား ချပြနိုင်ရေး
အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော ဥပဒေများအား အများသိအောင် advocacy လုပ်ခြင်း
အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများသင်ကြားပေးခြင်း
Rape has increraded sharply from previous years in myanmar. Accroding to Ministry of Home Affairs said inareport about sexual assault in the country in 2017 said there ware 1405 rapes comiited across Myanmar in 2017, including 508 adult women victims and 897 child victims.
In 2016, 1100 sexual assault cases were recorded, 429 against adult victims and 671 child victims. Between 2016 and 2017, the number of rape casues rose by 305.
အံ့သြအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆိုးရွားဆုံဖြစ်ပေါ်နေသော လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ လျှော့ချနိုင်ရန်အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားပါမည်
လိင်အကြမ်းဖက်မှု ဥပဒေအားပိုမိုပြင်းထန်၍ မျှတမှုရှိရန် advocacy လုပ်ရန်
အမျိုးသမီးများအား လိင်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပေါ် လာပါက ကာကွယ် ရေးသင်တန်းပေးရန် (self defense)
ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသင်တန်းပေရန်၊ campaign များပြုလုပ်ရန်
Either workplace or public area, harassing women in sexual way or with sexual intent encouraging not only disturbing or annoying women’s stability but also occurring in sexual violence.
AntAll’s Sexual Harassment Prevention Program aims to become an organization which have transpency and convey the voices for women who are silenlty harress by men in govermental and other priavte or public office and enterprises.
Publication and detailing about what action comprise sexual harassment.
Dissemination about law related with sexual harassment to be informed to public how will be in disadvantage when it is commited.
Supporting Women in Myanmar Since 2017
Earned in 21 mos.
Call +959 770012949 to Donate Or Contact Us to get Involved
No. 134, Khayaypin Lane,9Ward, Mayangone Township, Yangon, Myanmar
Call Us: +959 770012949
Copyright © 2019. Ant-All Association | Nonprofit Website Design by Black & Blue Tech Labz.